वा जैविक monobasic carboxylic एसिड, को अणु जो दुई कार्बन अणुहरु र Carboxyl समूह (यसको नाम पायो यो carbonyl र Carboxyl समूहका हुन्छन् किनभने), भनिन्छ एटैन वा एसेटिकएसिड (कार्बन अणुहरु को नै नम्बर संग alkane संग analogy द्वारा) समावेश छन्। त्यो, जैविक यौगिकों यस वर्ग को सबै कम Aliphatic सदस्य जस्तै, एक पन्जेन्ट गंध छ। यसको रासायनिक सूत्र लेखिएको सकिन्छ: CH3COOH। परिवेश अवस्था एक बेरंग तरल मा। घनत्व - 1.05 जी / cm³। चपाउने दात ठूलो 60,05 G / mol बराबर छ। यो 16,75 ° C को एक तापमान (बरफ समान को जम क्रिस्टल तल, त्यसैले भनिन्छ बरफ) मा पिघलने। 118,1 ° सी को एक तापमान मा फोडे को अपवर्तनी सूचकांक 1.372 बराबर छ।
जैविक यौगिकों यस वर्ग को प्रतिनिधिहरु हाइड्रोक्लोरिक वा सल्फ्युरिक एसिड भन्दा कमजोर छ, तर जब संग तुलना कार्बोनिकएसिड, सबैभन्दा कठोर एसेटिकएसिड छ। रासायनिक गुण को carbonyl अणु र hydroxyl समूह यसको सदस्य द्वारा निर्धारित। आपसमा यति कडा प्रभाव मात्र एउटा सानो हदसम्म carbonyl यौगिकों (aldehydes, amides, ketones, esters) वा अल्कोहल को गुण को reminiscent गर्न सामाग्री को रासायनिक गुण। आयनीकरण हे-एच संपर्क कारण खींच इलेक्ट्रॉनों carbonyl समूह हुन्छ। तसर्थ, जडान धेरै अल्कोहल भन्दा अलग गर्न सजिलो छ। एक carbonyl गर्न hydroxyl समूहबाट इलेक्ट्रॉनों को विस्थापन आंशिक गाह्रो एक nucleophile यसलाई आक्रमण गर्न बनाएर, सकारात्मक शुल्क को कार्बन अणु कम गर्छ। तसर्थ, carbonyl यौगिकों संग सजिलै अन्तरक्रिया धेरै पदार्थ CH3COOH साथ प्रतिक्रिया छैन।
एउटा सानो हदसम्म एसेटिकएसिड हाइड्रोजन आयनों गठन गर्ने अलग गर्न सक्नुहुन्छ: CH3COOH + H2O ↔ CH3CO2ˉ + H3O +। यो विशेषता द्वारा छ neutralization NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O: नुन गठन परिणाम जो आधारमा, संग । Carboxylic एसिड लवण साधारण पानी घुलनशील छन्। यो सुविधा प्राकृतिक स्रोतहरू देखि निकासी सुविधा। त्यसैले एसिड जैविक पदार्थ देखि छुट्टयाएर पहिलो बीच थिए। उदाहरणका लागि, एटैन अमिलो दाखमद्य प्राप्त भएको थियो। बलियो हाइड्रोजन बन्धन जसबाट जैविक सल्वैंट्स मा, CH3COOH को अणु बीच गठन गरिन्छ र ग्याँस चरण मा, यो एक dimer रूपमा विद्यमान छ।
एसेटिकएसिड र पानी सबै अनुपात मा miscible छन्। यो एकाग्रता आधारमा यसको गुण परिवर्तन। सामान्य धातु, फलाम, म्याग्नेसियम र जस्ता सहित तिर आक्रामक। यो हाइड्रोजन र नुन-भनिन्छ acetates पैदावार: मिलीग्राम +2CH3COOH → (CH3COO) 2Mg + H2 ↑। एल्यूमीनियम एक एसिड प्रतिरोधी passivation फिलिम खेल्छ देखि एल्यूमीनियम ओक्साइड, को को एल्यूमीनियम ट्यांक, परिवहन CH3COOH लागि प्रयोग स्टेनलेस स्टील ट्यांक संग।
2CH3COH + O2 → 2CH3COOH: उद्योग, एसेटिकएसिड नै नाम को एक aldehyde को ओक्सीकरण उत्पादित छ। aldehyde को 800 किलो देखि टन CH3COOH तयार पारे। तर उत्पादन लागि थप हाल विधि - हावा अक्सिजन संग butane एक तरल चरण ओक्सीकरण 150-170 ° C को एक तापमान र 50 वायुमंडल को एक दबाव मा: CH3CH2CH2CH3 + 2O2 → 2CH3COOH +2H2O। वास्तवमा, प्रतिक्रिया देखाइएको भन्दा धेरै जटिल छ। एसेटिकएसिड बाहेक, byproducts एक नम्बर उत्पादित। कं + CH3OH → CH3COOH: दुवै यी विधिहरू मेथानोल को carbonylation द्वारा (किनभने उच्च तेल मूल्यहरु को) बाहिर धक्का छन्। मध्यम को एक नुन छ एक उत्प्रेरक को उपस्थिति मा प्रक्रिया आगम र प्रमोटरों (activators) - आयोडाइड आयनों। केही सूक्ष्मजीवहरु को क्षमता किण्वित छन् इथाइल रक्सी, CH3COOH मा ओक्सीकरण पछि, जीव रसायन उत्पादन प्रयोग: C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O । प्रक्रिया धेरै जटिल छ र धेरै चरणमा स्थान लिन्छ।
एसेटिकएसिड अनुसार GOST 19814-74 संग निर्मित छ (कृत्रिम र regenerated) GOST 18270-72 (उच्च शुद्धता) र GOST 61-75 (प्रतिक्रियाशील)। यो एउटा महत्त्वपूर्ण रासायनिक अभिकर्मक र रासायनिक औद्योगिक मुख्य रूप उत्पादन प्रयोग गरिएको छ कि छ, प्लास्टिक, कृत्रिम फाइबर, रंग, फिलिम र अरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो sevilene प्राप्त (Ethylene comonomer रूपमा) को प्रक्रिया मा प्रयोग गरिन्छ जो vinyl एसीटेट को उत्पादन को लागि कच्चा माल छ। कारण यसको रासायनिक र शारीरिक गुणहरू एसेटिकएसिड को प्रयोग। CH3COOH लवण फाइबर मा रंजक फिक्सिंग को लागि सेवा गर्ने mordants छन्।
घरपरिवारमा पतला एसेटिकएसिड अक्सर descaling एजेन्ट रूपमा प्रयोग गरिन्छ। खाना उद्योग मा यस्तो अम्लता नियामक र एक मसला रूपमा कोड E260 खाद्य additives अन्तर्गत प्रयोग गरिन्छ। खाद्य थपिएको ईयू, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड प्रयोगको लागि स्वीकृत। खाना उद्योग मा315% वा पानी मा CH3COOH को एकाग्रता संग सिरका को रूप मा नुनीन बनान उत्पादनहरु लागि प्रयोग गरिन्छ सिरका संग एउटा ठूलो अंश 70% को आधारभूत पदार्थ को। धेरै esters एसेटिकएसिड को कन्फेक्शनरी उद्योग प्रयोग गरिएको।
उपभोक्ता को संतुलन - सिद्धान्त र अभ्यास
कटौती - Sherlock होम्स को एक विधि? छैन साँच्चै
परमेश्वरको अस्तित्व को प्रमाण सम्भव कि?
Cuneiform icons को मूल बारेमा प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गर्नुहोस्
Andrey Nikolaev: जीवनी र काम
के यदि आईफोन बन्द गरिएको छ र सक्रिय छैन?
सूची, मूल्यांकन, समीक्षा: आँसु गर्न मजेदार कमेडी